ငြင်းစရာရှိ ငြင်းတတ်ဖို့ (Saying No by Guy Perring) - Myanmar Network
ငြင်းစရာရှိ ငြင်းတတ်ဖို့ (Saying No by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on June 7, 2012 at 10:28 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ မိမိဆန္ဒကို ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ဖော်နိုင်စွမ်းအကြောင်း လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဓိက နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ “no” (ဟင့်အင်း) လို့ ပြောတတ်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “no” လို့ ပြောတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရတာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “no” လို့ ပြောတတ်မှ အလုပ်တွင်ကျယ်ပြီး ဖိစီးမှု လျော့နည်းမှ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကိုလည်း ပိုပြီးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းသင့်တာတွေကို ငြင်းမှ သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးအတွက် ပိုပြီး အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို (ဘယ်အချိန်မှာ) ငြင်းရမယ်ဆိုတာကို သိနားလည်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် လူတိုင်းကို ကူညီချင်တဲ့သူ၊ အကူအညီ တောင်းလာရင် ငြင်းရမှာ အားနာတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးသဖြင့် လိုအပ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းများကြောင့် “no” လို့ ပြောမထွက်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါသလား။
• တစ်ဘက်သား စိတ်မကောင်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။
• ဘာကြောင့် ငြင်းရတယ်ဆိုတာ ရှင်းမနေချင်ဘူး။
• တစ်ဘက်သားက မကောင်းသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားနိုင်တဲ့ စကားမျိုး မပြောချင်ဘူး။
• မတွေ့တာ လ နဲ့ချီ ကြာနေလို့ ခပ်မြန်မြန် ထ ပြန်ရမှာ အားနာနေတယ်။
• တစ်ဘက်သားက ကိုယ့်အတွက် အထူးသဖြင့် အရေးပါသူဖြစ်တယ်။
• ကူညီချင်ပေမယ့် တကယ်တော့ အချိန်မရှိဘူး။
အဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ငြင်းသင့်ပေမယ့် ပြောမထွက်ဘူး ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် မကြာသေးခင်က အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေကို ပြန် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
“no” လို့ ပြောလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ အောက်ပါတို့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
• ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာမှာ ယုံကြည်မှု
• မိမိတစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင် လုပ်ရာမှာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှု
• မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုဟာ အခြားသူတွေရဲ့ အကဲဖြတ်ချက်ပေါ် မူမတည်ဘူးဆိုတာ နားလည် သဘောပေါက်ခြင်း
• ကိုယ့်ရဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို ကိုယ်တိုင် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အမြော်အမြင် ရှိမှု
အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ “no” လို့ ပြောဖို့ လိုအပ်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ကျွမ်းကျင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး မပျက်ပြားစေဘဲ “no” လို့ ပြောနိုင်မယ့် နည်းလမ်း အကြံပြုချက် ၇ခု ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ I have deadlines for several projects at the moment. အခု အချိန်မီ အပြီးသတ်ရမယ့် အလုပ်တွေ ရှိနေလို့ပါ။ (အခု လက်ရှိ အချိန် မရှိကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်မီ မပြီးနိုင်မှန်း၊ အရည်အသွေး ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် မပြီးနိုင်မှန်း သိလျက်နဲ့ အလုပ်တွေကို ထပ်ပြီး လက်မခံပါနဲ့။)
၂။ I don’t think I have the necessary skills to complete this kind of work. ဒီအလုပ်မျိုးကို ပြီးစီးအောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုမျိုး မရှိပါဘူး။ (ကိုယ်မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို လက်မခံပါနဲ့။)
၃။ I really don’t have the time at the moment. အခု တကယ့်ကို အချိန်မရှိလို့ပါ။ (အလုပ်မအားလို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
၄။ You will doagreat job yourself. ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင် အရမ်းကောင်းမှာပါ။ (အထက်စီးက ပြောသလို ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ရက်သားနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု မရှိလို့ အကူအညီတောင်းနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
၅။ Why don’t I arrangeameeting with John who I’m sure can help? ဂျွန်က အကူအညီပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဂျွန်နဲ့ တွေ့ရအောင် စီစဉ်ပေးမယ်လေ။ (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကို အခြား ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီ ညွှန်းပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို အားကောင်း စေနိုင်တယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။)
၆။ I’d be happy to help later. နောက်တော့ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (တကယ်ကူညီချင်မှ တကယ်ကူညီနိုင်မှ ဒီလို ပြောပါ။)
၇။ No. မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ (ဂရုပြုပြီး ပြောမယ်ဆိုရင် တိုက်ရိုက်ငြင်းဆန်လို့ ရပါတယ်။ အကျယ်ကြီးမပြောပါနဲ့။ သိပ်မြန်မြန်ကြီး မပြောပါနဲ့။)
အခုဖော်ပြထားတဲ့ စကားတွေကို အသုံးပြုပြီး အကူအညီတောင်းလာသမျှကို ခေါင်းညိတ်မနေဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း ထုတ်ဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by myothuya on January 29, 2015 at 10:20